अचम्म ! मानिसको टाउकोमा सिंग पलाएपछि… « गोर्खाली खबर डटकम
मानिसको सिंग हुँदैन, यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । यो प्राकृतिक कुरा पनि हो ।
सिंग केही जिवजन्तुहरुको मात्र हुन्छ । सिंगले जनावरलाई बाहिरी आक्रमणको प्रतिकार गर्न मद्दत गर्दछ । तर के तपाईले कुनै मानिसको सिंग देख्नुभएको छ ? पक्कै छैन होला । किनकी मानिसको सिंग हुँदैन ।
श्रीमान् सुतिरहेका थिए, श्रीमतीले अनलाइन कपडा बेच्नका लागि बनाइदिइन् मोडल
कोरोना संक्रमित पूर्वरानी शाहको स्वास्थ्यमा सुधार, आईसीयूबाट वार्डमा सारियो